[Friday, February 1st, 13] :: Khudbadii wadaxweynaha ka waran?
Dhaqane iyo dhaashane dhalin weeye magaallo.dhaqankoodu mid maaha .Dhaliil la iskama qaato .DHafoor taabasho weeye .Dhibtana la iskuma eego.daily way kaftamaan . Hadana la isma dhegaysto.Dhoohanaad tahay waalan iyo adaa dhoocil ka liita warkoodaa ku dhamaadee .Kaalayoo bal dhegayso.
Dhaashane:Waar bal khudbadii madaxweynaha ka waran.Sow khudbadii qarniga may aheyn?
Dhaqane:Khudbad kulmiyoo fiican bay aheyd.
Dhaashane: Khudbad kulmiye waa maxay ?Ma kulmiyuun buu madaxweynuu la hadlayey ? Somaliland oo dhan buu la hadlayee.
Dhaqane:Dee meesha dadka fadhiyey ee uu la hadlayey sow wada kulmiye may aheyn ?Labada golle iyo wasiiraduba sow kulmiye maaha ? Ma cid kalaa fadhiday meesha?
Dhaashane:Maxaa wada kulmiye ka dhigay ? Waa hayadii dalka oo dhane.
Dhaqane:Adeer horta khudbada ma khudbad uun baad u taqaan?Waxaa jirta khudbad reer.Waxaa jirta khudbad xisbi.Waxaa jira khudbad qaran.Waxaa jirta khudbad caalami ah ,sida ta qaramada midoobay laga hor jeediyo.Anigu khudbadaan dhegaystay waxay aheyd khudbad xisbi.
Dhaashane: Oo maxay ku kala duwanyihiin khudbada xisbiga iyo ta qaranka loo jeedinayaa?
Dhaqane:Bal eeg wa kaa qofkaanu la sheekaysanaynaa.Maba kala saari karo khudbad xisbi iyo tu qaran toona.Adeer xisbigu amaan uun buu ku khudbadeeyaa .dhulkaanu rinjiyeynaa. Cirkaanu nuuradaynaynaa .Waxaas uun shubaa.Khudbada qaranku se waaqicigay ka hadashaa .Waxaas waa ku guulaysanay . Waxaa wa ku guuldaraysanay.Waxaa waa qaban doonaa.
Dhaashane: Dee horta qofku haduu is indho tiraayo ,indho looma samayn karo.Laakiin wuxuun baad sheegtay markaanu idinka dheeraynay inaa hinaasteen.Yaa is gaadhay , bal sanad kaloo qudha na sug.
Dhaqane:Dee waa runoo waxaa ku dheeraysaan sida ingiriisa wadanka looga saaro.Anagu taa maanaan aqoone.Barri markaa xamar inagu dartaana waa duusheen sow maaha?
Dhaashane:Wuxuunbaan maqli jiray .Wuxuu uurku doonayuu afku kaa xadaa.Waar xamartan idinkuuba sheegee adeer anagu maba naqaan.
Dhaqane:Waar bal dhegaystaa .Ma xataa markaa meeqaam sare la fadhidaan?
Waa qalinkii: Baxnaan xaaji aden.